Ndị na-emepụta ihe na-arụ ọrụ katọn - Ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ katọn nke China
L800-A&L1000/2-A katọn na-arụzi igwe tray bụbu maka igbe burger
L usoro bụ ezigbo nhọrọ iji mepụta igbe hamburger, igbe ibe, akpa takeout, wdg. Ọ na-anabata micro-kọmputa, PLC, ihe ntụgharị ugboro ugboro ugbu a, nri cam cam, akpaaka gluing, teepu mpempe akwụkwọ akpaka, mbanye yinye, na Sistemụ servo iji chịkwaa isi ọkpọ.
Nri ehihie Igbe Akpụ Machine
Ọsọ dị elu, arụmọrụ dị elu, nchekwa ike na nchekwa;
A na-agụpụta mmepụta mgbe niile na mgbanwe atọ na ngwaahịa emechara na-akpaghị aka.
Igwe ihe mkpuchi akwụkwọ ice cream
Oke ọsọ 250pcs/min (dabere na ihe na nha)
Ikuku ikuku 0.6Mpa (akọrọ na dị ọcha compressor ikuku)
Akụrụngwa nkịtị akwụkwọ, Maluminum foil akwụkwọ, ntekwasa akwụkwọ: 80 ~ 150gsm, akọrọ wax akwụkwọ ≤100gsm
Igwe na-eme igwe mpempe akwụkwọ hydraulic ML400Y
Nha efere mpempe akwụkwọ 4-11inch
Omimi nke nnukwu efere akwụkwọ≤55mm;dayameta ≤300mm(akụrụngwa akụrụngwa na-agbasa)
Ihe achọrọ ike 380V 50HZ
Mkpokọta ike 5KW
ML600Y-GP Hydraulic Paper Plate Ime igwe
Nha efere akwụkwọ 4-15”
Akwụkwọ Grams 100-800g/m2
Ihe eji eme akwụkwọ, akwụkwọ mpempe akwụkwọ, kaadiboodu ọcha, akwụkwọ foil aluminum ma ọ bụ ndị ọzọ
Ikike ọdụ ụgbọ abụọ 80-140pcs/min
Mkpokọta ike 8KW
ML600Y-GP ụdị elu-ọsọ & nwere ọgụgụ isi akwụkwọ efere igwe na-eji desktọpụ okirikiri nhọrọ ukwuu, nke kewapụrụ nnyefe akụkụ na ebu.Akụkụ nnyefe dị n'okpuru tebụl, ihe ọkpụkpụ dị na tebụl, nhazi a dị mma maka ihicha na nhazi.Igwe ahụ na-anabata mmanu akpaaka, nnyefe igwe, imepụta hydraulic na akwụkwọ ịfụ pneumatic, nke nwere uru nke arụmọrụ kwụsiri ike yana ọrụ dị mfe & mmezi.Maka akụkụ eletriki, PLC, nsochi fotoelectric, eletrik niile bụ akara Schneider, igwe nwere mkpuchi maka nchekwa, ọgụgụ isi & nrụpụta nchekwa, nwere ike ịkwado ahịrị mmepụta ozugbo.
MTW-ZT15 Auto tray bụbu igwe gluu
Ọsọ:10-15 tray / nkeji
Nkwakọ ngwaahịa:Igbe ndị ahịa:L315W229H60mm
Ogologo okpokoro:730 mm
Ịnye ọkụ:2KW;380V 60Hz